« Noely Politika » -
AccueilTresaka« Noely Politika »
« Noely Politika »
22/12/2018 admintriatra Tresaka 0
Tsy toa ny isan-taona ny fankalazana ny Noely amin’ity taona 2018 ity fa hafa mihitsy. Tsy azo ihodivirana mantsy ny raharaha mafampana eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao dia ny vao niatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. Mizara roa araka izany ny andrasan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao. Eo aloha ny fiandrasana ny mpamonjy. Andro ahatsiarovana ny nahaterahany mantsy ny fototry ny Noely ho an’ny mpino Kristiana. Etsy andaniny kosa, ary azo ialana ny fiandrasana ny valim-pifidianana. Izany hoe ny fiandrasana izay ho filoham-pirenena.Mikorontana araka izany ny sain’ireo olom-pirenena manoloana izao zava-misy eto amin’ny firenena izao. Hanana endrika hafa kely mantsy ny fanomanana, sy ny fiatrehana ny fety amin’ity 2018 ity.
Raha ny tokony ho izy dia efa fotoan’ny fiatoana eo amin’ny tontolo politika izao fotoana izao, fa fidirana ao anatin’ny fanomanana ny fety tanteraka kosa. Izany hoe efa tokony hitsahatra aloha ny adilahy politika, sy izay rehetra voakasik’izany. Tsy azo eritreretina akory anefa izany noho izao zava-mitranga eto amin’ny firenena izao. Mahazo vahana kokoa mantsy ity resaka politika ity noho ny antsirambina ataon’ny sasany.
Tsy nandeha araka ny tokony ho izy ohatra ny fanomanana ny fifidianana, ka nahatezitra ireo olom-pirenena maro. Maro lavitra noho izany nitranga tamin’ny fifidianana fihodinana voalohany ihany koa ireo fahadisoana hita nandritra izao fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa izao. Ireo rehetra ireo no antony nahatonga fimenomenonana maro teo amin’ny olom-pirenena, ka nahatonga azy ireny tsy afaka mifantoka tsara amin’ny fanomanana ny fetin’ny Krismasy.
Ny fifanaratsiana sy ny ompa atao eny amin’ireny tambazotra sosialy ireny manginy fotsiny. Tsy misy fifanajana sy fifandeferana fa dia atao av okoa izao rabirabin-teny rehetra izao, ka mahatonga ny maripana hiakatra avo dia avo. Misy amin’ireo mpomba ny kandidà laharana faha-13 aza moa dia midaroka ireo izay tsy mitovy hevitra ara-politika aminy.
Etsy andaniny, tsy misy handrenesam-peo fa asa na variana mihanoka ny fiadanana noho ny fahazoana toerana politika ireto tompon’andraiki-panjakana mpisolo toerana mba napetraka eto amin’ny firenena. Hany ka lasa baranahana, sy gaboraraka no manjaka eto ankehitriny. Toa ireny tany tsy misy fanjakana, sy tsy misy mpitondra ireny mihitsy e!. izay no ilazana fa dia ho nolely politika ity Krismasy indray mitoraka ity.
Filoha Rajaonarimampianina : Akaikin’ny madinika
Nifarana teo amin’ireo tsy manan-kialofana ny asan’ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ho an’iny taona 2017 iny. Ny 30 desambra 2017 lasa teo, tokony ho tamin’ny 9ora alina tany ho any, dia nidina nijery manokana ireo tsy ...Tohiny
Marc Ravalomanana : Kandidan’ny vahoaka malagasy
Fivarotana ny tranon’ i zafy Albert : Nailik’i Andry Rajoelina amin’olon-kafa ny rihitra
Loto, pesta eto Antananarivo : Tompon’andraikitra voalohany ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana